Semalt विशेषज्ञ डिजिटल मार्केटिंग मा5सबैभन्दा खराब प्रश्नहरु परिभाषित गर्दछ
इन्टरनेट को दुनिया मा के भइरहेको छ को रहनु भनेको बाँच्नको एक मात्र तरीका हो। एक मार्केटर र सोशल मिडिया रणनीतिकारको रूपमा, तपाइँ हालका चलनहरू र हालसालका दिनमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर राम्ररी परिचित हुनुपर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईंले ठूलो संख्यामा ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्दछ। वास्तविकतामा तपाईसँग सबै एसईओ र मार्केटिंग संसाधनमा पहुँच हुन सक्षम नहुन सक्छ, तर तपाईका केही ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट पार्न तपाईले यसलाई पहुँच गर्नुपर्दछ। र कहिलेकाँही, तपाईंलाई भर्खरको र उन्नत मार्केटि practices अभ्यासहरू प्रयोग गर्न भनियो। इमान्दार हुनको लागि, तपाईंसँग सबै आधारभूत सामग्री मार्केटि strate रणनीति र विधिहरूमाथि एक पकड हुनुपर्छ यदि तपाईं इन्टरनेटमा सफलता प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने।
सेमान्टका शीर्ष विशेषज्ञ इभान कोनोवालोभले यहाँ रणनीतिकारले आफ्ना कार्यहरू गर्ने क्रममा सोध्न नहुने यी पाँच प्रश्नहरू साझा गर्छन्।
प्रश्न 1। के तपाइँ मेरो भिडियो र सामग्री भाइरल बनाउन सक्नुहुन्छ?
इमानदारीपूर्वक भन्नु पर्दा, यो सम्भव छैन कि कोहीले तपाईंको भिडियोहरू र सामग्रीहरू सेकेन्डमा नै भाइरल बनाउँन। केवल केहि मार्केटरहरू र सोशल मिडिया विज्ञहरूले भविष्यवाणी गर्न सक्दछन् के के भाईरल हुन सक्छ र के उपयुक्त छैन। भाइरल हुनुको मतलब तपाईंको भिडियो र सामग्रीहरू आकर्षक, जानकारीमूलक र प्रभावशाली हुनुपर्दछ। यो मापन गर्न एक अप्रत्याशित र असम्भव छ यदि तपाईंको सामग्री सोशल मिडियामा भाइरल हुनेछ र यसले २ 24 घण्टामा कति हेराई लिन सक्छ। केवल तपाईंले गर्न सक्ने चीज भनेको तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई मूल्यवान र जानकारीपूर्ण चीजहरू प्रदान गर्नु हो। यो तपाईले चाहेको परिणामहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
प्रश्न # २। Growth० दिन पछि म कति वृद्धि देख्छु?
सामग्री मार्केटरहरूले तपाईंको कार्बनिक खोज परिणाम सुधार गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई कहिले कहिले सोध्नु हुँदैन कि उनीहरूलाई कामहरू पूरा गर्न कति दिन लाग्छ। कहिलेकाँही, तिनीहरूले घण्टामा अपेक्षित परिणामहरू दिन सक्दछन्, र अन्य समयमा उनीहरूलाई तपाईंको वेबसाइटको लागि धेरै विचारहरू उत्पन्न गर्न सम्भव नहुन सक्छ। तपाइँले एक वा दुई महिनामा जादुई नतिजाको आशा गर्नुहुन्न र सामग्री बजारले आफ्नो काम गर्नु अघि केही हप्ता कुर्नुहोस्।
Quesiton # 3। मैले पहिलो पृष्ठमा मेरो वेबसाइट वा कुञ्जी शब्द कहिले आशा गर्ने?
तपाईंको वेबसाइट प्रबर्धन गर्दा थुप्रै चीजहरूको ख्याल राख्नु हुन्छ। यो तपाइँको सामग्री कसरी संलग्नतामा निर्भर गर्दछ, तपाइँको लक्षित दर्शक को हो र तपाइँले कति खोजशब्दहरू र वाक्यांशहरू प्रयोग गर्नुभयो। जब सामग्री मार्केटिंग रणनीतिहरूको योजना बनाउनको लागि आउँदछ, तपाईंले कुञ्जी शब्दहरूमा फोकस गर्नुपर्दछ तर तिनीहरूलाई सामग्रीमा सामग्री नपार्नुहोस्। गूगलले कसरी आकर्षक सामग्रीको साथ खोज ईन्जिनलाई क्रान्तिकारीकरण गर्न विभिन्न अपडेटहरू सुरू गरेको छ। खोजी ईन्जिनहरूले तपाईंको साइट राम्रो रैंक प्राप्त गर्न सक्दैन जब सम्म तपाईं दुबै छोटो पुच्छर र लामो पुच्छर कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्न।
प्रश्न # 4। मलाई किन सामाजिक मिडिया साइटहरू आवश्यक छ?
जब तपाईंको दर्शकले फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, र अन्य सामाजिक मिडिया नेटवर्कहरू प्रयोग गर्दैन, तपाईंले आफ्नो साइटको लागि छुट्टै प्रोफाइलहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ। यसका साथै तपाईले कहिले पनि आफ्नो सामग्री बजार वा रणनीतिकारलाई सोध्नु हुँदैन किन कि सामाजिक सञ्जालको बचावको लागि महत्वपूर्ण किन यी प्लेटफर्महरू बिना सम्भव छैन। केहि दर्शकहरु अरु भन्दा धेरै सक्रिय छन्: - यसको मतलब मानिस तपाईको स्थान को परवाह नगरी तपाईले सँधै हेरिरहन्छन्। उदाहरण को लागी, फेसबुक को १.4 मिलियन भन्दा बढि सक्रिय उपयोगकर्ताहरु छन्, ट्विटर माथी 300०० मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु पाउँदछ, र लिंक्डइन33० मिलियन भन्दा बढी दर्ता भएका सदस्यहरुका लागि प्रसिद्ध छ
प्रश्न #।। तपाई किन पाहुना पोष्टहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छैन?
अन्तिम तर कम्तिमा होइन, तपाईंले कहिले पनि सोध्नु हुँदैन कि किन सामग्री मार्केटरले तपाईंको सामान प्रचार गर्नको लागि अतिथि पोष्टहरू प्रयोग गरिरहेको छैन। मलाई यहाँ भन्नुहोस् कि उहाँ तपाईंलाई भन्दा राम्रो जान्नुहुन्छ र तपाईंको साइटलाई क्रमबद्ध गर्नका लागि सेतो टोपी एसईओ रणनीतिहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। अतिथि पोष्टहरू स्पाम वेबसाइटहरू र कालो टोपी SEO युक्तिहरूसँग सम्बन्धित छन्, त्यसैले तिनीहरूसँग जानको कुनै आवश्यकता छैन।